Ejipta: Tafatsangana Indray I Ahmed Shafiq · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2012 1:34 GMT
Navoakan'ny sombim-bokatra valim-pifidianana filoham-pirenena ejipsiana fiodinana voalohany fa ny kandidàn'ny Mpirahalahy Miozolomana Mohamed Morsi sy ny Praiminisitra teo aloha Ahmed Shafiq no hifanandrina amin'ny fiodinana faharoa hotontosaina amin'ny 16 sy 17 Jona.
Niteraka hatairana tamin'ny maro tokoa ny fisongadinan'i Shafiq, iray amin'ny “feloul” na “sisa tavela” tamin'ny fitondrana Mubarak. Tarataratra ihany fa ny ankamaroan'ny Kôpta sy ny maro hafa no nisafidy an'i Shafiq noho ny tahotra fanasilamoana [islamisation] ny firenena sy mba hitadiavana firenena mitombina.
Nisaran-kevitra tokoa ny mpiserasera momba ny fahombiazan'i Ahmed Shafiq ity.
Valan-dresak i Ahmed, 14/5/2012. Saripika Virginie Nguyen (CC BY-NC-ND 3.0).
Ao amin'ny tsanganana bilaogy iray mitondra ny lohateny hoe “Izao no fotoana Hangìnana”, i Zeinab Mohamed no manoratra:
Ny hany fiononako dia ny atsasaky ny mpifidy ejipsiana 90 tapitrisa ihany no nandray anjara (50 tapitrisa) nanerana ny firenena, izany hoe miresaka momba ny mpifidy 25 tapitrisa ihany isika, fifidianana manantantara mampahatsiahy ahy ny faharesena tamin'ny Ady Enina Andro.
Tsy manan-teny aho, tahaka ny mifidy afobe anankiroa: Mpirahalahy Miozolomana sa Shafiq!!!
Mendrika tezerana daholo isika revolisioneran'ny #Jan25 rehetra monina ao Kairo mpihetsiketsika ‘nifidy an'i Shafiq’ sy mikatona ao amin'ny tontolon'ny fifampitam-baovaon'olo-tsotra. Tompon'andraikitra amin'io tsy misy fisalasalana isika.
Tsy te-hiteny aho izao saingy zavatra iray azo itokisana ny fahatsapana ao amin'ny taranaka mitovy amiko mitovy tamin'ny fahatsapana nananan'ny taranaka niaina tamin'ny 1967 ary mampatahotra ahy izany fahatsapana izany.
Afisy Shafiq manakaiky ny foiben i Shafiq voatondraka soratra "feloul". Saripika Al Jazeera Live Blog (CC BY-NC-ND 3.0).
Nisioka am-pahatezerana i Hafsa Halawa:
tsy mahatana amany ao anaty pataloha noho ny fihomehezana izao i Mubarak
Naneho ny fahadisoam-panantenany ny mpanakanto mpanao sariitatra Ahmed El Massry:
Amin'izao valim-pifidianana izao, miala tsiny izahay ry maritiora
Mampitandrina ny mpanao gazety Ejipsiana-Amerikana Reem Abdellatif:
Nilaza ny manampahaizana politika nifampiresaka tamiko fa hisy ny fifandonana miaraka amin'ny “fanehoan-kery, herisetra, filazana fa misy hosoka” raha vao mandresy i Shafiq
Misy kosa ny olona hafa, etsy ankilan'izay, nanohana an'i Ahmed Shafiq ary mankalaza ny fandreseny. Manazava ny antony anohanany an'i Shafiq ny mpandraharaha monina ampitan-dranomasina Ashraf Ismail:
Manana fomba fisainana liberaly sy mpitahiry ny nentin-drazana Atoa Shafiq ary malaza ho olona pratika mikendry ny hampitombina ny firenena sy fampiasam-bola matanjaka. Raha eo amin'ny elatra henjana mikambana amina vondrona manana tantara feno herisetra kosa Atoa Morsi.
Raha eo amin'ny sehatry ny fampiasam-bola rahampitso sy ny fandaharan'asam-pampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena, azo heverina fa handroso ara-toekarena haingana i Ejipta raha ny fandaharan'asan'Atoa Shafiq no mihatra. Raha tsy izay kosa dia manàna tahotra sy mailoa amin'ny fandehan'ny fandraharahana hitranga ao Ejipta raha Atoa Morsi no mandresy amin'ity hazakazaka ity.
Nasongadin'i Ranya Khalifa:
@RanyaKhalifa: Atsaharo ny fanomezana tsiny ny Kôpta noho ny fisongadinan'i #Shafiq!! Raha mitady “demokrasia” ianao dia aza asingatsingana..malalaka amin'izay tiany hofidiana ny Ejipsiana!
Nanatsonga ny tenin'i Shafiq ny mpanao gazety Rawya Rageh:
@RawyaRageh: #Shafiq: Tsy misy izao zavatra izao raha tsy tao anatin'ny fitondrana teo aloha aho, raha milaza izany izahay, dia Ejipta manontolo no izay. Mila mihalehibe isika, ajanòny io mampiady hevitra io.
Na dia nampitandrina aza ny revolisionera sasantsasany fa hidina an-dalambe ry zareo raha mandresy i Ahmed Shafiq, nilaza kosa ny mpitarika ny Antoko Al Nour, antoko Salafista ejipsiana lehibe indrindra fa tsy hanao fihetsiketseham-panoherana.